moi: May 2017
မြ၀တီမြို့၌ မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသ ငါးပြည်ထောင်စု ဓမ္မခရီးစဉ်ကြွချီလာသော သံဃာတော် ၇၈ ပါးအား ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပူဇော်ပွဲ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပ
မြ၀တီ မေ ၃၁
မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသတစ်လျှောက် သုဝဏ္ဏဘူမိဆိုင်ရာငါးနိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မဏ္ဍိုင်ပြု၍ ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားသော မြန်မာနိုင်ငံ၊ ထိုင်း၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံများမှ ရဟန်းတော်များ၊ သမိုင်းပညာရှင်များနှင့် မီဒီယာများ ပါဝင်သည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့သည့် မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသတစ် လျှောက် ငါးနိုင်ငံသို့ ဓမ္မခရီးစဉ်ကြွချီလျက်ရှိရာ ယနေ့ မေလ ၃၁ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီခွဲက မြ၀တီမြို့၊ အမှတ်(၁) ချစ်ကြည်ရေးတံတားမှ မြ၀တီမြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကာ ဒေသခံပြည်သူများက ဆွမ်းဆန်စိမ်းများ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ လောင်းလှူပူဇော်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted by moi at 3:54 PM No comments:
ငါးသိုင်းချောင်းမြို့၌ ရေယာဉ်ဆိပ်ခံတံတားနှင့် ဆိပ်ကမ်းမုခ်ဦးဖွင့်ပွဲကျင်းပ
ငါးသိုင်းချောင်း၊ မေ ၃၁
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ရေကြည်မြို့နယ်၊ ငါးသိုင်းချောင်းမြို့၊ မြို့မရပ်ကွက် ငဝန်မြစ်ကမ်းရှိ ရေယာဉ် ဆိပ်ကမ်းမုခ်ဦးနှင့် ဆိပ်ခံကွန်ကရိတံတားဖွင့်ပွဲကို မေလ ၃၁ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့ရာ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးဝင်းဌေး တက်ရောက်နှုတ်ခွန်းဆက် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး တိုင်း/ခရိုင်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ရေကြည်မြို့နယ်နှင့် ငါးသိုင်းချောင်းမြို့မှ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ/ မြို့နယ် ရေယာဉ်စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးကြီးကြပ်မှု ကော်မတီမှတာဝန်ရှိသူများ/ဒေသခံပြည်သူများ စုံညီစွာတက်ရောက်၍ ဆိပ်ကမ်းမုခ်ဦးနှင့်ဆိပ်ခံတံတားအား ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်။
Cyclone Mora wreaks havoc, cuts power in Maungtaw
Cyclone Mora wreaked havoc in Maungtaw Township in northern Rakhine State, leaving transportation and communications in chaos and causingaloss in power to the township as it crossed into Bangladesh early yesterday morning.
Posted by moi at 10:43 AM No comments:
2nd Pyithu Hluttaw 5th regular session holds its 6th day meeting
At the 6th day meeting of 2nd Pyithu Hluttaw 5th regular session, held on 30 May, as regards the motion put forward by Daw Aye Aye Mu (a) Daw Sharmie of Kalay constituency, titled “Urging the government to lay down orders, rules, regulations on taking arrests withaview to controlling frequent changes of hearing the cases without relevant reasons for the convenience of relation between the public and government offices and to drop down the bribery and corruption”, the Hluttaw decided to put it on record, with the motion seconded by6representatives.
2nd Amyotha Hluttaw 5th regular session holds its 6th day meeting
Six day meeting of 2nd Amyotha Hluttaw 5th regular session was held at the meeting hall of the Amyotha Hluttaw in Nay Pyi Taw at 10 am yesterday.
Mumbai — To strengthen connectivity with Southeast Asia, the government is likely to kickstart work on highway from Meghalaya to Myanmar, as part of the India-Myanmar-Thailand trilateral pact, from next month.
Senior General holds talks with Turkish Ambassador
Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing received Turkish Ambassador Mr. Kerem Divanlioglu in Bayinnaung Retreat in Nay Pyi Taw yesterday.
At the meeting, the Ambassador expressed his interest in the culture of Myanmar and upon his visit to the Defence Services Museum discovered that Turkey and Myanmar have had relations since the time of King Anawratha aboutathousand years ago. He then went on to discuss matters relating to airways between the two countries, the development of education and economic sector, cooperation with the Tatmadaw, problems Turkey is facing with national security and democracy.
The Senior General talked on the friendly relations between the two countries and the advanced civilization of the ancient Turkey Empire. He said there are many areas of cooperation available between the two countries’ militaries such as cooperation for counter-terrorism as one country alone cannot effectively combat terrorism. Later on, they discussed about Myanmar’s Peace Process, which included the Union Peace Conference-21st Century Panglong, development efforts in Rakhine State with importance on compiling statistics.
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေး
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တူရကီ သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kerem Divanlioglu နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
နှစ်နိုင်ငံအကြား လေကြောင်းဆိုင်ရာ၊ ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေး
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော် ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တူရကီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Kerem Divanlioglu အား လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
Posted by moi at 6:47 AM No comments:
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kerem Divanlioglu အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တူရကီ သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kerem Divanlioglu အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၃ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမ ဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Posted by moi at 8:31 PM No comments:
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစစ်တမ်း (၂၀၁၆)နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစစ်တမ်း (၂၀၁၆)နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်း အဝေးကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ပဉ္စမ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ကို ယနေ့နံနက် (၁၀)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်၌ ကျင်းပ သည်။
Posted by moi at 6:59 PM No comments:
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင်ကျင်းပရာ မေးခွန်း(၅)ခု မေးမြန်းဖြေကြားခြင်း၊ အစီရင်ခံစာ(၁)ခု၊ ဥပဒေကြမ်း(၁)ခုနှင့် အဆို(၁)ခုတို့အား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရ ယူခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။
လေးမျက်နှာမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မြို့နယ် အဆင့်သက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ်ခြင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ
လေးမျက်နှာ မေ ၃၀
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင် လေးမျက်နှာမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မြို့နယ်အဆင့် သက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို မေ ၃၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီက မြို့နယ်အားကစားခန်းမတွင် ကျင်းပသည်။
ရှေးဦးစွာစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလှခိုင်ကအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။
Posted by moi at 4:10 PM No comments:
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိုရာအရှိန်ကြောင့် ပုဂံညောင်ဦးတွင် သစ်ပင်ကြီးများနှင့် ဓာတ်တိုင်များ ပြိုကျပျက်စီး
ညောင်ဦး မေ ၃၀
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်ဦးခရိုင်၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်တွင် မေ ၃၀ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲအချိန်က ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိုရာအရှိန်ကြောင့် ညောင်ဦးမှ ပုဂံမြို့သစ်သို့သွားရာ အာနန္ဒာဘုရား တောင်ဘက်မုဒ်အနီးအနော် ရထာလမ်းမပေါ်သို့ အချင်း ၃ ပေပတ်လည်ခန့်၊ အမြင့် ၂၅ ပေခန့်ရှိသက်တမ်းရင့် ကုက္ကိုပင်ကြီးတစ်ပင် လဲကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ အဆိုပါ ကုက္ကိုပင်ကြီးလဲကျမှုကြောင့် လမ်းမီးတိုင်အမှတ် ၂၃၅ ဓာတ်အားလိုင်းတိုင်ပါ လဲကျ၍ လမ်းပိတ်ဆို့မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted by moi at 1:32 PM No comments:
Pyithu Hluttaw: Electrification for Kyaukpadaung and embanking the Mu River
The 2nd Pyithu Hluttaw 5th regular session’s 5th day meeting was held at 10 am yesterday and replied to 8 inquiries, approved one report and put forward one motion and one report to the Hluttaw.
Posted by moi at 12:34 PM No comments:
Amyotha Hluttaw discusses child labour and Myanmar citizenship
Union Minister for the Labour, Immigration and Population has committed to tackling child labour issue by implementing long-term and short-term National level projects.
Posted by moi at 12:32 PM No comments:
Posted by moi at 12:30 PM No comments:
Union Minister for Information meets Director of Free Press Unlimited of Netherlands
Union Minister for Information Dr Pe Myint metadelegation led by Mr.Leon Willems, Director of Free Press Unlimited of Netherlands, yesterday at his ministry in Nay Pyi Taw.
Posted by moi at 12:29 PM No comments:
NLD, Hluttaw, government meet for first time
A tripartite meeting among the government, the Hluttaw and the ruling party was held for the first time at NLD headquarters in Yangon on Sunday.
Posted by moi at 12:26 PM No comments:
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင်လုံ (ဒုတိယ အစည်းအဝေး) အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီး
နေပြည်တော် မေ ၂၉
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင်လုံ (ဒုတိယ အစည်းအဝေး) ပြည်ထောင်စု သဘောတူ စာချုပ် အစိတ်အပိုင်း (၁) လက်မှတ် ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိုဌာန -၂ (MICC-2) ၌ ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လုံကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ (UPDJC) ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက် ကျေးဇူးတင် စကား ပြောကြားသည်။
Posted by moi at 10:09 AM No comments:
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ်နှင့် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့အား သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Bipin Rawat အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင်လည်းကောင်း၊ ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Dang Dinh Quy အား မွန်းလွဲ ၃ နာရီ ၁ဝ မိနစ်တွင် လည်းကောင်း နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ သီးခြားစီ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် အိန္ဒိယတပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် အိန္ဒိယတပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Bipin Rawat အား ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီ မိနစ် ၄၀ တွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ သည်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ကျင်းပပြီးမေးခွန်း (၈)ခု မေးမြန်း ဖြေကြားခြင်း၊ အစီရင်ခံစာ (၁)ခု အတည်ပြုခြင်း၊ အဆို (၁)ခုနှင့် အစီရင်ခံစာ (၁)ခု တင်သွင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။
Posted by moi at 10:05 AM No comments:
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသား လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသား လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
Posted by moi at 10:04 AM No comments:
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဖေမြင့်အား နယ်သာလန်နိုင်ငံ Free Press Unlimited မှ မူဝါဒရေးရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် အဖွဲ့ လာရောက် တွေ့ဆုံ
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဖေမြင့်အား နယ်သာလန်နိုင်ငံ Free Press Unlimited မှ မူဝါဒရေးရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Leon Willems နှင့်အဖွဲ့သည် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက် တွေ့ဆုံသည်။
Posted by moi at 9:49 AM No comments:
ဒလမြို့နယ် ဝဲကြီးကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲနှင့် ပညာပေးရေးဌာနသို့ လွဲပြောင်းပေးအပ်
ဒလ မေ ၂၈
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒလမြို့နယ် သမ္ဗန်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု ဝဲကြီးကျေးရွာရှိ အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း "ပညာပြည့်လျှံ" ကျောင်းဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲနှင့် ပညာရေးဌာနသို့ လွဲပြောင်းပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီအချိန်က အဆိုပါကျောင်းဝန်းအတွင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
(၁၁)ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ (UPDJC) အစည်းအဝေးကျင်းပ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်
(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ (UPDJC) အစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီ ၁၅မိနစ် တွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည် ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန-၂ ၌ ကျင်းပရာ UPDJC ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်သည်။
ဒီးမော့ဆို မေ ၂၈
ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်ခရိုင် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ယူဆမိုဆိုကျေးရွာ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ) အဆင့် တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ကျောင်းဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲကို မေ ၂၈ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပသည်။
Posted by moi at 7:22 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံတိုက်ကွမ်ဒိုအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဖလားနှင့်နွေရာသီသင်တန်းဆင်း တိုက်ကွမ်ဒိုပြိုင်ပွဲဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
ရန်ကုန် မေလ ၂၈
မြန်မာနိုင်ငံတိုက်ကွမ်ဒို အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဖလားနှင့် သင်တန်းဆင်း တိုက်ကွမ်ဒိုပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ညနေ (၃) နာရီအချိန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အောင်ဆန်းအားကစားပြိုင်ဝင်း၊ မိုးလုံလေလုံအားကစားရုံ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ အားကစားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်) ကျောင်းအုပ်ကြီးညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးအောင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ တိုက်ကွမ်ဒိုအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြဟန်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်အမှုဆောင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသံရုံးမှ ဒုတိယသံအမတ်နှင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဖိတ်ကြားထားသူများ၊ ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများ တက်ရောက်ကြသည်။
Posted by moi at 7:16 PM No comments:
ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးအားလုံး ကျောင်းသို့ရောက်ရှိလာစေရန် ဆရာ/မများ၊ ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ စေတနာရှင်မိဘပြည်သူများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
ဘားအံ မေ ၂၈
ကရင်ပြည်နယ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် ပြည်နယ်လုံးကျွတ် ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးအားလုံး ကျောင်းအပ်နှံရေး နေ့ အခမ်းအနားကို မေလ ၂၈ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီအချိန်က ဘားအံမြို့ အမှတ်(၁)အခြေခံပညာအထက်တန်း ကျောင်း မြသံလွင်ခန်းမ ကျင်းပသည်။
Posted by moi at 6:34 PM No comments:
ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း (ကြက်ခြေနီ) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အင်းတော်မြို့တွင်ကျင်းပ
အင်းတော် မေ ၂၈
မြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် ရှေးဦးသူနာ ပြုစုနည်း (ကြက်ခြေနီ) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ အင်းတော်မြို့ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေ ၂၈ နံနက် ၉ နာရီ အချိန်က ကျင်းပပြုလုပ်သည်။
Posted by moi at 6:12 PM No comments:
State Counsellor to meet northern armed groups
Seven ethnic armed groups will meet with State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi today and will present to herabook outlining their political stance, according to Zhao Guo An. the United Wa State Army’s (UWSA) external relations officer.
Posted by moi at 11:08 AM No comments:
Day two of Union Peace Conference achieves agreement for most points in five sectors
The Union Peace Conference— 21st Century Panglong (second session) discussed position papers in five sectors and reached agreement for the majority of the points in the five sectors.
U Kyaw Tin attends 16th round of Myanmar- India Foreign Office Consultations
Minister of State for Foreign Affairs U Kyaw Tin and Foreign Secretary of the Republic of India H.E. Dr. S. Jaishankar attended the 16th round of Myanmar- India Foreign Office Consultations held at the Ayeyawaddy Meeting Hall of the Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw, at 11:15 hours on 25th May 2017.
Posted by moi at 10:57 AM No comments:
Vice President U Myint Swe receives Chinese Special Envoy for Asian affairs
Vice President U Myint Swe received the Special Envoy for Asian Affairs of the Ministry of Foreign Affairs of China, H.E. Mr. Sun Guoxiang at the Credentials Hall of the Presidential Palace yesterday morning in Nay Pyi Taw.
Posted by moi at 10:54 AM No comments:
Duties of Information Ministry explained to Hluttaw
Union Minister for Information Dr. Pe Myint explained the duties and responsibilities of the departments under the ministry to the Pyithu Hluttaw Health and Sports Development Committee yesterday afternoon atameeting in Hluttaw Affairs Committee Building 13 in Nay Pyi Taw.
Posted by moi at 10:51 AM No comments:
Pyithu Hluttaw Speaker attends the ceremony of national education strategy of Ministry of Education
Pyithu Hluttaw Speaker U Win Myint attended the ceremony of national education strategy of Ministry of Education (2016-2021) and promoting the educational challenges, promoting the learning opportunities and quality of education at the building of Hluttaw in Thabinsaung hall yesterday afternoon.
Senior General Min Aung Hlaing receives separately German Parliamentary State Secretary and outgoing Ambassador of Pakistan
Senior General Min Aung Hlaing, Commander-in-Chief of Defence Services, received Dr. Ralh Brauksiepe, Parliamentary State Secretary at the German Federal Ministry of Defence in Bayitnaung Guest House in Nay Pyi Taw yesterday afternoon.
Fire breaks out in Kyaukpyu
A fire broke out due to overheating of wires at the electrical appliances shop in Alaepaing Ward of Kyaukphyu Town, Rakhine State yesterday morning.
A second chance for peace
The Union Peace Conference—21st Century Panglong 2nd Session held
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi openedasecond round of talks with the country’s many ethnic armed groups yesterday, looking to renewaquest for peace afterayear in which fighting continued in some northern regions.
Posted by moi at 10:02 AM No comments:
Posted by moi at 10:01 AM No comments:
Opening Speech of Amyotha Hluttaw Speaker Mahn Win Khaing Than at the Union Peace Conference – 21st Century Panglong (Second Session)
Following isabrief summary of the opening speech delivered by Speaker of Amyotha Hluttaw Mahn Win Khaing Than at the opening ceremony of the Union Peace Conference – 21st Century Panglong (Second Session).
First of all, Speaker of Amyotha Hluttaw Mahn Win Khaing Than thanked State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, ethnic leaders and personnel at the event.
Posted by moi at 9:59 AM No comments:
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi’s speech at the Opening Ceremony of the Union Peace Conference—21st Century Panglong 2nd Session
Specially Invited Guests, Delegates,
It gives me great pleasure to see you here today, and may I wish you all health and happiness.
What I see here before me, in this hall, is the potential of our country. Here, together, are the foundations upon which we can build our dream of peace.
Posted by moi at 9:57 AM No comments:
The greetings extended by Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing
Officials of the State, personnel of the respective armed ethnic groups and local and foreign guests attending this second session of the Union Peace Conference-21st Century Panglong with full confidence, I wish you all health and happiness.
Saw Mutu Sae Poe, KNU Chairperson delivers opening address at 2nd Session of UPC-21st Century Panglong
The opening address made by Saw Mutu Sae Poe, Chairman of the Karen National Union at the 2nd Session of Union Peace Conference-21st Century Panglong is as follows:
Posted by moi at 9:53 AM No comments:
Opening speech of U Than Htay at Union Peace Conference – 21st Century Panglong (Second Session)
Following isabrief of the opening speech delivered by U Than Htay, Chairman, Union Solidarity and Development Party at the opening ceremony of the Union Peace Conference – 21st Century Panglong (Second Session).
Posted by moi at 9:50 AM No comments:
Press conference on first day of Union Peace Conference – 21st Century Panglong (Second Session)
Following the first day meeting of the Union Peace Conference – 21st Century Panglong (Second Session), members of the Union Peace Dialogue Joint Committee (UPDJC) secretariat Dr. Hlan Hmon Sar Khaung, Sai Kyaw Nyunt, U Hla Maung Shwe, Lt-General Khin Zaw Oo (retired) and U Zaw Htay heldapress conference with local and foreign media.
Posted by moi at 9:48 AM No comments: